Semalt: नक्कली साइट आगन्तुकहरू र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
सबै वेबमास्टरहरू तिनीहरूको वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्नको लागि गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्छन्। इभान कोनोवालोभ, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि यदि तपाईं आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स खातामा भ्रमणहरूमा स्पाइक याद गर्नुहुन्छ, सम्भावना यो छ कि रेफरर स्पामले तपाईंको साइटमा हान्यो। नयाँ वेबसाइटहरू र ब्लगहरू प्रति दिन to० देखि १०० भ्रमणहरू प्राप्त गर्दछन्, र यदि तथ्या .्कले २०० भन्दा बढी भ्रमण देखाउँदछ उचित SEO बिना, तपाईं समस्याको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ र यसको समाधान खोज्न प्रयास गर्नुपर्दछ।
तपाईंको पहिलो विचार "मेरो ट्राफिक बिस्तारै माथि गइरहेको छ" हुनेछ। जब तपाईं ती तथ्या into्कहरू खन्नुहुन्छ, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि रेफरर स्पामले तपाईंको साइटको लागि मौन रूपमा गडबड सिर्जना गरिरहेको छ।
आगन्तुकहरु कहाँबाट आए?
अधिकांश वेबसाइटहरू र ब्लगहरू जैविक खोजी र सामाजिक मिडिया साइटहरूबाट हिटहरू प्राप्त गर्दछन्। केहि वेबमास्टरहरू सन्दर्भको लागि विकल्प दिन्छन्, र सन्दर्भित साइटहरूका लिंकहरू तपाईंको Google एनालिटिक्स खाताको च्यानलहरू सेक्सनमा फेला पार्न सकिन्छ। यदि तपाईंले होशियारीका साथ अवलोकन गर्नुभयो भने, तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि रेफरलहरू हरेक दिन माथि जान्छन् र बढाइएको रेफरलहरू तपाईंको साइटको लागि राम्रो हुँदैन। कम-गुणवत्ता वा वयस्क वेबसाइटहरूको लिंकहरू हुनु भनेको तपाइँको वेबसाइट जोखिममा छ भन्ने संकेत हो। केहीको लागि, बढाइएको रेफरल राम्रो चीज हो, तर यो वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन।
मेरो वेबसाइटमा कसलाई जोड्दैछ?
साइटहरूको संख्या पहिचान गर्न रेफरल सेक्सनमा जानुहोस् जुन तपाईंलाई दिनको लागि रेफरल ट्राफिक पठाउँदै छ। तपाईं सायद यस क्षेत्रमा free-social-buttons.com, darodar.com, 4webmasters.org, र sanjosestartups.com हेर्नुहोस्। यदि तपाईंले यी वेबसाइटहरू गुगल गर्नुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि तिनीहरू वास्तवमै रेफरर स्पामरहरू हुन् र तपाईंलाई लगभग दैनिक नक्कली ट्राफिक पठाउँदैछन्। यसको मतलब यी रेफरल साइटहरूबाट आएको ट्राफिक तपाईंको पीडाबाहेक अरु केही पनि छैन।
रेफरर स्पाम नक्कली अनुरोध हो तपाईंको स्क्रिप्ट द्वारा तपाईंको साइटमा पठाइयो जुन तपाईंको HTTP रेफरकर्तालाई ठग्छ। HTTP रेफरर जानकारीको एक टुक्रा हो जब तपाइँ एक वेबसाइट बाट अर्कोमा सर्नुहुन्छ जब एक ब्राउजर द्वारा पारित। नराम्रो प्रकारले तपाइँको HTTP रेफरकर्तालाई स्प्याम वेबसाइटहरूमा सेट गर्नेछ जुन तिनीहरूको उद्देश्य इन्टरनेटमा प्रमोट गर्ने हो। यदि तपाईं तपाईंको साइटले प्राप्त गर्ने हिटहरूको संख्या वा ती लिंकहरूमा क्लिकहरू बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले कहिले पनि तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा भ्रमण गर्नु हुँदैन।
किन रेफरर स्पाम खतरनाक छ?
केहि वेबसाइटहरूले रेफरर लगहरू प्रकाशित गर्दछ र स्प्यामरहरूमा अन्य फाइदाहरू हुने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। जब डाटा इन्टरनेटमा प्रकाशित हुन्छ, स्पामकर्ताहरूले आफ्नै वेब पृष्ठहरूमा बढावा दिन्छन्। यस्तो देखिन्छ कि खोज ईन्जिनले उनीहरूको वेबसाइटहरू वा ब्लगहरू सजिलैसँग क्रॉल गर्दछ, उनीहरूलाई वैध ठान्दै। निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा रेफरर स्पाम खतरनाक छ:
यो तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खाता स्केच गर्न सक्दछ, र भ्रमणको संख्या सँधै फुलिन्छ;
यसले हाम्रो साइटमा कति वास्तविक आगन्तुकहरू छन् भनेर जाँच गर्न हामीलाई असम्भव बनाउँदछ;
यसले बाउन्स रेटलाई १००% मा वृद्धि गर्दछ, र सत्र अवधि सँधै ०:००:०० हुन्छ;
गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूले यी चीजहरू जान्दछन् र आउँदै गरेको दिनहरूमा तपाईंको साइटको रैंकिंगलाई तान्न सक्छ। त्यसकारण रेफरर स्पाम भ्रमणहरू वेबमास्टरहरूको लागि थोरै व्यस्त छन्। तपाईंले ती शicious्कास्पद वेबसाइटहरूको बिरूद्ध गम्भीर कदमहरू चाल्नु पर्छ ढिलो हुनु अघि र इन्टरनेटमा तपाईंको व्यवसाय नष्ट हुनु अघि।